उद्दारका नाममा सरकारको महंगो भाडा, रोजगारी गुमाएका र जे’लबाट छुटेकाले कसरी तिर्ने ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/उद्दारका नाममा सरकारको महंगो भाडा, रोजगारी गुमाएका र जे’लबाट छुटेकाले कसरी तिर्ने ?
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरे अनुसार उडानको तालिका र भाडा दर सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले भाडा दर सार्वजनिक गरेसंगै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ । सरकाले उद्दार गरेको कि लुटेको ?
विदेशवाट उद्दार गर्ने नाममा सरकारले सामान्य भन्दा अत्याधिक भाडादर तोकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको हो । कतिपय मुलुकवाट आएका नेपालीले जाँदा भन्दा अहिले अप्ठेरो अवस्थामा फर्कदा दोब्बर भन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको बताएका छन् । कोरोनाका कारण विदेशमा काम विहिन भएर अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई उद्धार गर्न सामान्य अवस्थाभन्दा दोब्बर भाडा तोकेको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा करिब २५ हजारलाई उद्धार गर्ने रणनीति अनुसार उद्दारको काम सुरु गरेको छ । तर त्यसको लागि भाडा भने सरकारले वेहोर्दैन । आगामी आइतबार (१४ तारिख)बाट बंगलादेशबाट उद्धार सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर दुःख पाएर वा अप्ठ्यारोमा परेर फर्किने आफ्ना नागरिकसँग दोब्बर भाडा लिन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ । जहाजको भाडा कामदारले काम गर्ने कम्पनी, कामदार पठाउने म्यानपावर वा कामदार स्वयंले तिर्नुपर्ने सरकारको नियम छ । युएई, म्यानमान र कुवेतवाट केही नेपाली स्वदेश फर्कीसकेका छन् । तर उनीहरुको यातायात खर्च कम्पनीले गरिदिएको छ ।
हिजो (बिहीबार) मात्रै कुवेतले उनीहरुकै खर्चमा ३ सय जनालाई नेपाल ल्याइदिएको हो । आज पनि कुवेतवाट करिब डेढ सय जना आएका छन् । अझै करिब २५ सय जना उसैको खर्चमा पठाउन लागेको छ।
सरकारी निर्णयले कोभिड १९ का कारण रोजगारी गुमाएका, जे’लमा बसेर छुटेका वा माफी पाएकालाई समेत आफ्नै खर्चमा आउनुपर्ने भएको छ । तर सामान्य भन्दा दोब्बर भाडा तिर्नुपर्दा सर्वसाधारण भने अप्ठेरोमा परेका छन् । पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने सूचीमा अधिकांश रोजगारी गुमाएका, जे’लबाट छुटेका नेपाली छन्।
चैतसम्म मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म धेरै नेपाली जाने÷आउने गरेका थिए। तर सरकारले तोकेको मलेसिया तथा खाडी मुलुकको भाडा ६० हजारदेखि ७० हजारसम्म रहेको छ। उद्धारको लागि सबैभन्दा सस्तो भाडा बंगलादेशको २० हजार तोकेको छ।
त्यस्तै रोजगारीका लागि गएर हाल कामविहीन बनेका नेपाली ल्याउन साउदी अरब ७२ हजार, रियाद ७७ हजार, दुवई ६१ हजार, आबुधाबी ६१ हजार, ओमान ६२ हजार, क्वाललम्पुर ६३ हजार ५ सय, दोहा ६६ हजार ५ सय, दिल्ली २५ हजार, मुम्बई ३८ हजार, बैंगलोर ४१ हजार भाडा तय गरेको छ।
शनिबार ५ जना मात्रै संक्रमित फेला परेको काठमाडौँमा आज फेरी डरलाग्ने गरी बढे कोरोना संक्रमित, काठमाडौँ उच्च जोखिममा